Ukufuywa Kwembuzi Zobisi eNingizimu Afrika
Imbuzi yenza kahle cishe kuzo zonke izindawo, njengoba ukubanda kakhulu noma ukushisa akuyithinti kabi. Izimbuzi zobisi zinenzuzo ngaphezu kwezinkomo, njengoba zingagcinwa ezondlweni ezimbi lapho izinkomo zobisi zingeke zigcinwe khona ngokwezomnotho. Ubisi lwezimbuzi lusetshenziselwa abantu ikakhulukazi izingane ezingaphuzi ubisi lwezinkomo. Nokho, kunjalo, lune-folic acid ephansi. Futhi nokuthiwa i-vitamin B9, i-folic acid iyadingeka ekwenzeni igazi, ukukhula kwamaseli, kanye nempilo yengqondo. Ubisi lwezimbuzi luphakeme amaprotheni namaminerali kunobisi lwezinkomo.
Ubisi lwezimbuzi lungaba nesinambitheka sokwehlukahluka ngenxa yezinhlobo zamafutha ku-ukhilimu, okwenza kube ukunambitheka okubushelelezi. Ubisi lwezimbuzi lungaba nesinambithe esinamandla phakathi nenkathi yokuzalanisa.
Izinhlobo Zezimbuzi Zobisi
Into ebalulekile okufanele uyicabangele lapho ukhetha imbuzi yilapho: uyothola kuphi imbuzi yakho elandelayo? Uma inani lenhlobo ethile lincane, khona-ke kukhona ingozi enkulu ukuthi ukhetha okuhlobene kakhulu nezilwane osuvele unazo. Lokhu kungase kuholele ekuzaleni.
Izinhlobo ezine eziyinhloko zobisi lwezimbuzi eNingizimu Afrika yi:
I-Saanen (emhlophe). Lena yiyo ethandwa kakhulu imbuzi yezinyosi emhlabeni.
I-Alpine yaseBrithani (emnyama)
Bunte Deutsche Edelziege (BDE) - imibala ehlukahlukene kodwa umthende omnyama kusuka enhloko kuya emsileni.
I-Saanen emhlophe isilwane esikhulu, esizwela ilanga elinzima lase-Afrika futhi ingase ibe ne-carcinomas (umdlavuza) wesibindi. Zifaneleka kakhulu ezindaweni ezipholile futhi zidinga umthunzi. Ama-Saanens akhiqiza ubisi oluningi (2.2 kg / ngosuku), njalol amafutha (3.1 - 3.8%) ajwayele ukubaphansi kunezinye izinhlobo. Zifanele ukukhiqiza ubisi wentengiselwano.
I-Toggenburg ensundu yangeniswa ivela e-Switzerland ngasekuqaleni kwama 1900 futhi yilezi zimbuzi ezindala kakhulu zobisi. I-Toggenburg yisilwane esiqinile, esinesisindo esiphakathi nezinwele ezithambile. Amadoda abe nezintshebe ezinkulu.Ikhiqiza ubisI Cishe ngo-2.0 kg / ngosuku namafutha aqukethwe u-3.2 kuya ku - 3.7%. Ayifanele izimo ezishisayo.
Imbuzi enkulu yobisi yaseBrithani i-Long Alpine isilwane esihle - simnyama sinezimpawu ezimhlophe, nejazi elimnyama (abesifazane). Izilwane eziyisishiyagalolunye - abesifazane abayisithupha nabesilisa abathathu bangeniswa bevela ezweni lase-UK phakathi kuka-1924 no-1936. Izimbuzi zaseBrithani ze-British Alpine zikhiqiza ubisi - 2.0 kg / ngosuku. Futhi zikhiqiza nangenkathi yobusika.Ziqukethe amafutha aphakathi kwa-3.2 - 3.8%.Zithanda izimo ezifudumele futhi hhayi emanzini.
I-Bunte Deutsche Edelziege (BDE) imbuzi enkulu enemibala ehlukahlukene. Ingakwazi ukuhamba kahle futhi isilwane esivundile esiphila isikhathi eside esiyisifo esiqinile kakhulu. I-BDE idunyiswa ngobisi bayo obumnandi futhi ingabekezelela izimo ezinzima.
Imbuzi enengane eyodwa noma ngaphezulu izobe iboniswe amandla ayo - kufanele ibe umama omuhle futhi ikwazi ukukhiqiza amanani amaningi obisi. Hlola isisindo sayo (ulinganisela okweminyaka yayo), amandla emilenze nezinyawo, amazinyo kanye nesimo kanye nempilo. Kufanele ibe nesibindi esiqinile, ngaphandle kwesigaba esingavamile noma esinzima okungase sibe ubufakazi bokutheleleka kwangaphambilini.
Abesilisa kufanele babe namandla, bephilile futhi bakhule kahle. Amadoda angena phondo amukelekile.
Inani lezilwane ezithengwa lixhomeke emkhatsini wesilinganiso somhlambi umlimi afuna ukusungula, inani lemali elitholakalayo, ubukhulu bemakethe othanda ukuyinika kanye nesilinganiso sokukhiqiza ngokushesha kwezimbuzi.